Vidio: Ihe Nzuzo nke Izu Nchọpụta Nchọgharị Ihe
Fraịde, Jenụwarị 6, 2012 Fraịde, Jenụwarị 6, 2012 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, m na-eziga nke anyị ọzụzụ ahịa folks a screenshot… peeji nke 1 nke ọchụchọ maka Sandler ahịa ọzụzụ. Ihe puru iche banyere nsonaazụ peeji bụ na enwere nsonaazụ vidiyo na ya - maka ebe ọzụzụ ọzụzụ Charlotte Sandler. Aha njirimara vidiyo na nkọwapụta kachasị mma iji nweta ya na nsonaazụ ọchụchọ.
Vidio a na-adọrọ uche dị ukwuu dịka naanị onyonyo gosipụtara na ibe ahụ, ekwenyesiri m ike na ọnụego pịa-ọ dị mma. Nkọwa vidiyo na-amalite site na njikọta azụ na saịtị ụlọ ọrụ ha, kwa, iji nyere aka mee ka ndị mmadụ gbanwee. Corporatelọ ọrụ nne na nna ha anaghị ekwe ka ha bulie ma ọ bụ rụọ ọrụ na weebụsaịtị ha, yabụ ikike itinye vidiyo nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma nke ebe ọzụzụ ndị a na-elebara anya na injinị ọchụchọ.
Ọbụghị naanị Youtube bụ ihe ichoro nke abuo na ụwa, ha na-egosiputa nsonaazụ vidiyo dị ka ngalaba n'ọtụtụ nsonaazụ njin ọchụchọ na Google. Ọtụtụ mmadụ achọghị achọghị ịgụ… ha chọrọ ịmaba na vidiyo. N'ihi ya, vidiyo abụwo ihe nzuzo dị ogologo nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa inbound, ọkachasị na ibe nwere nnukwu okwu ọchụchọ. Ihe atụ a dị n’elu bụ ezigbo… na ọzụzụ ọzụzụ Sandler n’obodo ukwu ọ bụla, ha niile na-atọ ọchị maka ọnọdụ yana ụlọ ọrụ ọzụzụ asọmpi na-achọkwa nsonaazụ ọchụchọ ndị ahụ!
Vidiyo na-aghọ ngwa ngwa dị mkpa nke ikike ụlọ ọrụ iji gwa ndị ahịa, ọrụ ahịa na ịbawanye ọnụnọ weebụ. Iwuli ikike nke Youtube n'ime ihe ngwanrọ SEO anyị na-enye ndị ahịa anyị nghọta dị oke egwu iji hụ na azụmaahịa ma ọ bụ ọrụ ha pụtara na peeji mbụ nke Youtube yana Google. Krista LaRiviere, Onye isi oche na onye isi ala, ụlọ nyocha gShift
Vidio dị ezigbo mkpa, n'eziokwu, na ụlọ ọrụ dị ka ụlọ nyocha gShift etinyela Youtube vidiyo nsuso ozugbo na nyocha nyocha igwe nyocha ha:
ụlọ nyocha gShift enyekwara ndị ahịa ha vidiyo iji nyere ha aka bulite vidiyo Youtube ha maka ogo ogo:
Ederede aha, nkọwa na mkpado bụ isi ihe maka iji Keywords rụọ ọrụ nke ọma. Gbalịa iji isiokwu dị ka okwu mbụ karịa n'etiti etiti ma ọ bụ okwu ikpeazụ na aha na nkọwa. Ọ bụrụ na ị na-akwagide ndị ọbịa na saịtị gị, anyị na-akwado itinye URL dị ka akụkụ mbụ nke nkọwa ahụ. Youtube gosipụtara naanị akara nke nkọwa ahụ ọ gwụla ma ịpịrị gbasaa, yabụ ịnwe njikọ pụtara ìhè ga-ewepụtakwu okporo ụzọ gaa na saịtị gị.
Douglas, ị kọwaala mkpa ọ dị vidiyo. Mana gwa m otu ihe: Achọrọ m bulite vidiyo nke m ma ọ bụ na m nwere ike ịhọrọ vidiyo metụtara ya na YouTube, dịka ọmụmaatụ?
M na-ajụ nke a n'ihi na ọtụtụ mgbe, ndị na-ede blọgụ anaghị enwe ihe ndekọ iji dekọọ vidiyo ma bulite ya.